Ihlobo Lokugcina likaSilvia Blanch, inoveli kaLorena Franco yobugebengu | Izincwadi Zamanje
Ihlobo Lokugcina likaSilvia Blanch yincwadi yobugebengu yombhali waseSpain uLorena Franco. Ishicilelwe ngo-2020 futhi ingenye yezincwadi zokugcina zomlingisi nomlobi. Isakhiwo esikhulu sesihloko ukunyamalala kukaSilvia Blanch. Ngaphandle kokungabaza, yindaba ethokozisayo egcwele izimfihlakalo, lapho kubalwa khona abalingiswa abambalwa, kepha abanesithakazelo.
U-Lorena Franco uyavuma ukuthi wayenza le ndaba isuselwa ekunyamalaleni kuka-American Leah Roberts, okwenzeka ngo-Mashi 2000. UFranco wengeza eminye imininingwane yaleli cala encwadini yakhe, njengokunyamalala kukaSilvia - njengoLeah - emgwaqeni omkhulu. Yimoto yakhe kuphela etholakale lapho ingenamkhondo noma mkhondo wokuthi ukuphi, okuyiqiniso lokuthi kuze kube manje kuyindida.
1.1 Umjaho wezincwadi
1.2 Izincwadi zikaLaura Franco
2 Ihlobo Lokugcina likaSilvia Blanch
2.2 Ugxuma ngesikhathi
2.3.1 Umuntu wokugcina ukubona uSilvia
2.3.2 Umsolwa omkhulu
2.3.3 U-Alejandra, intatheli
U-Lorena Franco ungowokuzalwa e-Barcelona, ​​wazalwa ngo-1983. Unezifundo zobuciko bemidlalo yeshashalazi, azenza eNancy Tuñón Theatre School eyaziwayo. UFranco wakhe umsebenzi ophumelelayo wokuba ngumlingisi, kokubili ku-TV naku-cinema yaseSpain, ngamafilimu afana ne: Ukushaya kwenhliziyo, I-ishalem y I-Heimlich Maneuver. Impumelelo yakhe yakamuva yefilimu injenge protagonist ka Phaharganj (I-Bollywood).
U-Lorena Franco ubonakalise ukudlula kwakhe kulezi zinhlamvu ngokusebenzisa ukuzishicilela ukwazisa ngemisebenzi yakhe. Vele, ipulatifomu yesethulo bekungeyona enye ngaphandle kokuthi Ama-Amazon. Umsebenzi wakhe wokuqala awuthumele kwaba Umlando wemiphefumulo emibili (2015). Kwathi ngo-2016 wethula ezinye izincwadi eziyi-10, ezifaka: Impilo emnandi, Amagama, Yisiphi isikhathi esikhohliwe y Kwenzeka eTuscany (Cha. 1 iyathengiswa I-Amazon).
NgoSepthemba 2016, wethula incwadi eyamenza wahlonishwa kakhulu: Isihambi sesikhathi. Le noveli, enezimpawu zothando nezinganekwane zesayensi, ibe yinombolo 1 ekuthengisweni ngefomethi yedijithali, kuzwelonke nakwamanye amazwe. Ngalo msebenzi umbhali waqala Isikhathi seTrilogy, okuhambisana namanoveli: Kulahlekile ngesikhathi (2018) futhi Inkumbulo yesikhathi (2018).
Izincwadi zikaLaura Franco
Umlando wemiphefumulo emibili (Disemba, 2015)
Impilo emnandi (NgoFebhuwari, 2016)
Yisiphi isikhathi esikhohliwe (Mashi, 2016)
Impilo engingayikhethanga (Ephreli, 2016)
Hlala Nami (Ephreli, 2016)
Izinsuku zami noMarilyn (Meyi, 2016)
Amagama (Meyi, 2016)
Lapho kuhlala khona ukukhohlwa (NgoJuni, 2016)
Amahora wokuchitha (Agasti, 2016)
Kwenzeka eTuscany (Okthoba, 2016)
Uyayazi (NgoJuni, 2017)
Isihambi sesikhathi (2016 / 2017)
Kulahlekile ngesikhathi (Mashi, 2018)
Iklabhu yaphakathi kwamabili (Julayi, 2018)
Inkumbulo yesikhathi (Novemba, 2018)
Ngubani odonsa izintambo (Januwari, 2019)
Iqiniso lika-Anna Guirao (Mashi, 2019)
Ihlobo Lokugcina likaSilvia Blanch (NgoFebhuwari, 2020)
Wonke umuntu ufuna uNora Roy (Mashi, 2021)
U-Lorena Franco wethula isasasa lamakhasi angaphezu kwama-300 agcwele izimfihlakalo nezimfihlo kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Indaba isethwe eMontseny, idolobha elincane eBarcelona. Encwadini kuzoba khona izahluko ezimfishane ngaphandle kokuqagela, ngasinye sazo sinosuku ekuqaleni kanye negama le-protagonist, ophethe ukulandisa isinqamu kumuntu wokuqala.
Ukuphela kuka-2020, umbhali wabelane ngamanethiwekhi akhe omphakathi lokho IZeta Studios uthole amalungelo okubukelwa phansi kwalokhu inoveli emnyama. Le nkampani ehlonishwayo yokukhiqiza yaziwa ngamaphrojekthi ayo aphumelele, phakathi kwawo uchungechunge Elite noma ama-movie: Amamitha amathathu ngaphezulu kwesibhakabhaka, Ngiyakufisa y Superlopez.
Le noveli iqala ngo-2018, unyaka ngemuva kwalelo hlobo lapho uSilvia Blanch enyamalala. Intatheli u-Alejandra Duarte uphethe ukwenza ukubuyekeza okuyisikhumbuzo kwale nhlekelele engaqondakali. U-Alex - njengoba le ntatheli esencane yaziwa - kufanele ahambele edolobheni lakubo likaSilvia ayoxoxisana nabathandekayo bakhe nabantu bakubo ngokwenzekile.
IMontseny idolobha elithule lapho uSilvia ayehlala khona nomndeni wakhe waze wanyamalala, yingakho zonke izakhamuzi zakhona zazazi. Wayengomncane kunabo bonke emndenini wakwaBlanch, owesifazane osemusha okhaliphile futhi ozethembayo, owayenekusasa eliphumelelayo emsebenzini wakhe omusha nokuqomisana kweminyaka.
Ihlobo lokugcina le ...
Ihlobo Lokugcina likaSilvia Blanch iqala ngo-2017, ilandisa ngokunyamalala kwentombazane. Ngemuva kwalokho ibekwa ngemuva konyaka, lapho u-Alex enikezwa ukubuyekezwa kwalo mcimbi. Ngenkathi abalingiswa bechaza le ndaba, hamba uye kokwedlule, ngaphambi kokunyamalala, nalapho kwenzeka khona izenzakalo ezizoholela ebubini.
Futhi, itulo libuye liguquke kuze kube ngu-2020. Lapho impilo ka-Alex ikhonjiswa ngemuva kophenyo nokushicilelwa okwalandela komsebenzi owenziwe.
Emlandweni, ULorraine Franco inezinhlamvu ezakhiwe kahle kakhulu. Izenzo zabo ezihlangene zihlanganisiwe ngaphandle komthungo, okunikeza ukuqina kule noveli. Izimfihlakalo ezikhona ekulandiseni zinikeza imibono ehlukahlukene kanye nokusonteka okungalindelekile okuphatha ukubamba umfundi aze amholele esiphethweni esimangazayo. Phakathi kwalaba, bagqama
Umuntu wokugcina ukubona uSilvia
Isahluko sokuqala sale ndaba ethokozisayo silandiswa ngowesifazane, ohamba ngomgwaqo eMontseny ngemoto yakhe. Kumethuse ukuthola izindaba ezimbi zokuthi unomdlavuza. Endleleni yakhe, buqamama uyakwazi ukubona ngeso lengqondo imoto kaBlanch; lapho emisa kancane ukugwema imoto, ubona ama-silhouettes amabili ehlathini, abone ukuthi nguSilvia noJan - isoka lakhe impilo yakhe yonke.
Uqhubeka nendlela yakhe, ngaphandle kokubheka isimo, ngoba wayecabanga ukuthi kwakuwuthando phakathi kwabantu abasha. Ngemuva kwaleso senzakalo, lona wesifazane wagxila eqinisweni lakhe elidabukisayo.
Umuntu wokuqala okwaxoxwa naye ngamaphoyisa njengomsolwa omkhulu kwakunguJan, isoka likaSilvia. Lokhu kwenzeka ngenxa yezitatimende zalowo wesifazane ohlangane nemoto kaBlanch ku-avenue futhi wabona abantu ababili abebecabanga ukuthi nguSilvia naye. Kepha bekungenakwenzeka ukuqinisekisa ukuthi uJan ubenguye lowo muntu, ngoba ubene-alibi ethile, eqinisekisiwe.
U-Alejandra uyintatheli esencane futhi ophikisayo wale ndaba. Uphethe ukudala indatshana ekhumbula unyaka wokuqala wokunyamalala kukaSilvia. Okwaqala njengomsebenzi olula ecaleni elivaliwe, kwashintsha ngokufika kwakhe edolobheni, ngoba ukubukeka kwakhe kwabangela ukungezwani okukhulu emndenini nakubantu.
U-Alex, ehehwa isimilo sokuziphatha kwawo wonke umuntu, uvumela imvelo yakhe yobuntatheli ukuba ivele futhi unquma ukuphenya ngokuqhubekayo. Efuna imininingwane emisha, unquma ukuxoxisana nabantu abaningana, oqale ngoJan, owamshiya ethukile kusukela ekuboneni kokuqala, futhi okwenza azisole ngokuhlangana naye ezimweni ezinjalo. U-Alex uzophenya ngaphandle kokwesaba, aze afike ezansi kuleli cala eliyindida elingaxazululiwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Ihlobo Lokugcina likaSilvia Blanch